Wasaaradda gaashaandhigga oo baahi ballaaran u qabta shaqaaleeynta ciidan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tababar milateri oo ka socda magaalada Stockholm. (kaydka sawirrada) sawir: Pontus Lundahl / TT
Wasaaradda gaashaandhigga oo baahi ballaaran u qabta shaqaaleeynta ciidan
La cusbooneeyay fredag 12 januari kl 12.15
La daabacay fredag 12 januari kl 10.19
Ciidanka gaashaan-dhigga ayay weli caqabad ka heeysataa sidii uu ku heli lahaa si mutadawac ah askar. Sannadkii tagay ayay wasaaraddu u baahatay askar gaarsii-san 3 500 si ey uga qeyb qaataan tababarka aasaasiga ah ee ciidammada, hase yeeshee aaney dad badani iska soo xaadirin.
Halka dhanka kale laga yaabo in afar daloolow mid dadkii isa soo xaadiriyey ee 2 230 ruux laga cabsi qabo iney isga haraan. Waana xaalad adag, sida uu sheegay Anders Åkermark, ahna madaxa laanta shaqaaleeynta ee wasaaradda gaashaan-dhigga.
–Natiijadu ma noqon middii la filayey. Halka dhanka kale ay sababteeda leedahay, sida uu sheegay.
Waa xaalad sidee halis u ah?
–Xaqiiqdii waa halis in eynaan ku guuleey-san sidii aan ku buuxin laheyn tirada goobaha tababarka ciidammada ee baahida loo qabo iyo sidii loo buuxin lahaa baahida gaashaan-dhigga.
Si loo buuxiyo baahida wasaaradda difaaca ayaa loo baahnaa iney sannadkii ina dhaafay 3 500 oo qof ey bilaabaan wax-barashada aasaasiga ah ee ciidammada. Hase yeeshee kolkii la doortey tiradii loo baahnaa tijaabooyinka dabadood ayey qaar badan oo ka mid ahaa dadkii la doortey isaga hareen iyadoona ey wax-barashadii bilaabeen 2 230 qof.
Sida uu sheegay Anders Åkermark iyo inay ugu wacan tahay waxyaabo ey ka mid yihiin iney isla markaasina ey wasaaradda difaaca iyo laanta shaqaaleeyntuba tabaabusheeynayeen dib u soo nooleeyntii shaqada qaranka, waana mid horseeddey iney wakhti dheer qaadato in jawaab lagu celiyo dadkii tijaabooyinka ku guuleeystey ee wax-barashada bilaabi lahaa.
Middaa ayaana ugu wacan iney bar tiradii loo baahnaa ee 3 500 ee tijaabooyinka ku baasaan ka soo qeeyb galaan bilowga wax-barashada.
–Haa, xaqiiqdii lama helin tiradii askarta ee wasaaradda gaashaan-dhiggu u baahnayd. Laakiin waxaan isku dayeeynaa in aanu sameeyno wixii karaankayaga ah sidii aannu ku xaji-san lahayn tirada aannu iminka heeysanno, isla-markaana aannu siino tababar wixii ey u baahan yihiin, inaan middaa xoogga isugu geeyno, sida uu sheegay Anders Åkermark.
Iminka waxaa dib loo bilaabey howlihii shaqada qaranka, iyadoona ey dad badani suurtagal u yeelan doonaan in la siiyo tababarka aasaasiga ah ee ciidammada sannad walba. Hase yeeshee uu siyaasiga xisbiga kristdemokraterna Mikael Oscarsson dhaleeceeyn u soo jeediyay habka uu nidaamka mutadawacu u shaqeeynayo iyo tirada yar ee ciidammada soo dalbadey.
–Waa mid welwel leh iyo guul-darro. Haddii aan la heeyn guutooyin ku filan, lama sameeyn karo tababarkii loo baahnaa. Tababarkii haddii aan la sameeynna saameeyn la heli maayo. Marka waa xaalad halis ah. Waana midda ugu wacan inuu xisbiga Kristdemokraterna dabada ka riixo sidii lagu heli lahaa nidaam u dhigma midka dalka Noorway ka jira, halkaasina oo la shaqaaleeyey askar iyo gudmad intaba, sida uu sheegay Mikael Oscarsson.